Ukraine: Fahafatesana mifono zava-miafina tao amin’ny Zoo ao Kiev · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2010 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, srpski, Italiano, English
zebra ao amin'ny Kiev Zoo avy amin'i Sergey Galyonkin ao amin'ny Flickr (2009)
Ity fitanisàna ora ity dia nivoaka tao amina lahatsoratra iray nosoratan'i Ukraina Kriminalnaya izay naverina navoaka tao amin'ny Legal Discussion Board [resaka mikasika ny lalàna] [RUS]:
Filaharan'ny fahafatesana tao amin'ny Zoo Kiev:
30 May, 2010 – omby dia iray (tsy fantatra ny anton'ny fahafatesany)
26 May, 2010 – rameva iray (tsy fantatra ny anton'ny fahafatesany)
26 Aprily, 2010 – elefanta iray (tsy fantatra ny anton'ny fahafatesany)
29 Martsa, 2010 – zebra lahy antsoina hoe Granta (tapaka ny tendany raha nndeha hoentina ho any amina kijàna natao ho azy rehefa lohataona)
Martsa 2010 – [sovalin'i Przewalski] iray…
Faran'ny volana Febroary 2010 – Ivan, tigera 20 taona avy any Amur …
3 Desambra, 2009 – [orsa mainty avy any Asia]iray…
Janoary 2009 – jirafy iray atsoina hoe Rami (tapaka ny tendany)
Nihetsika tamin'ny fomba mampihetsim-po mikasika ireo zava-nitranga tao amin'n Zoo Kiev ireo ny mpitoraka blaogy Okraniana. Maro no mino fa voapoizina ireo biby ireo mba hanalana ity zoo ity sy hivarotana ny tany amin'ireo mpampiasa vola amin'ny fandraharahana ara-barotra.
vsegda_tvoj mpampiasa LJ dia nanoratra [RUS]:
Ny velaran'ity zoo ity dia 34 hektara, toerana malalaka eo ampovoan'ny tanàna ity toerana ity, izay manodidina ny 5 ka hatramin'ny 10 arivo (iraialina) dollars eo ho eo ny vidin'ny [100 metatra toradroa]. Maro aminareo no mety hahatadidy fa telo taona lasa izay dia nisy tsaho mikasika ny fananganana tranobe sy tranombarotra teny. Tokony nafindra tany Vyshgorod ireo biby ireo [tanàna ivelan'i Kiev], kanefa ny tanin'i Vyshgorod dia tena mbola kely noho ny an'i Kiev. Noho izany dia nanapa-kevitra ireo manampahefana ny hamindra sasantsasany amin'ireo biby any amin'ireo faritra ambanivohitra ka hitsinjara ireo biby sisa tavela any amin'ireo zoos manerana ny nosy. Nijanona izany famindrana izany noho ny tantara ratsy be nitranga mikasika fananan-tany tsy ara-dalàna izay nahavoarohirohy ny mpanolotsainan'ny tanàna… Ny tena mahaliana dia ny ankamaroan'ireo biby maty ireo dia mampinono avokoa – matanjaka kokoa noho ireo “predators” na ireo biby hafa. Saingy azo hazavaina mora izany – ireo biby maty rehetra ireo dia nanana kijàna midadasika avokoa. Rehefa haingana ny fahabangan'ireo tranom-biby ireo, dia haingana ihany koa ny mahalasa ity Zoo ity ho toeram-ponenana ho an'ireo mpanankarena…
Ny fahafatesan'ny elefanta iray antsoina hoe Boy, izay sady mariky ny zoo Kiev, no tena voaresaka betsaka. Ny fitantanana ity Zoo ity, nanondro efa ho herintaona izay, dia mino fa voapoizina ity elefanta ity, kanefa ny voalazan'ireo manampahaizana ho anton'ny nahafaty an'i Boy dia tena nifanohitra tamin'izany. Raha ny voalazan'i TSN.ua, ireo manampahaizana sasany niteny fa voapoizina ity biby ity, ny sasany indray mino fa noho ny tsy fikarakarana sy ny tsy fanomezana sakafo ara-dalàna azy no nahafaty ity elefanta ity.
Nandritra ireo volana vitsy lasa dia very mihoatra ny 2 taonina ity elefanta ity noho ny fampihenan-danja henjana nasaina nozakainy. Ireo mpitsabo ny biby ao amin'ity zoo ity mieritreritra fa diso be lanja loatra i Boy (nilanja 6 taonina izy, nefa ny antonony amin'ity karazana elefanta ity dia 2 taonina) ary ity fanenana ity dia hahasalama azy, hoy ny tatitr'i focus.ua. Ny aterineto Okraniana dia feno ny sarin'ity elefanta ity talohan'ny fanenana sy taoriana.
Ny tantara izay voalohany tao amin'ny aterineto dia navoakan'i Alexander Nikolov, mpiambina niara-niasa tamin'ity elefanta ity ary mbola izay ihany no asany taorian'ny nahafaty an'i Boy, dia naverin'ireo mpitoraka blaogy sy media mahazatra navoaka indray. Alexander dia nanameloka ny mpitantana vaovao ho tsy matihanina sy mpampijaly biby. Raha ny voalazan'i Nikolov, ny antony nahafaty ity elefanta ity dia noho ny fiovàna tampoka tamin'ny fanenana sy ny rarintsain'ilay biby. Alexander nanoratra:
Taorian'ny fandidiana azy tamin'ny 2009, dia nahena be mihitsy ny lanjan-tsakafo nomena an'i Boy… Tany amin'ny tapaky ny volana Martsa tamin'ity taona ity dia mbola niova ihany ny fampihenana ny lanjany … Nandritra ny fanavaozana ny tranony, dia nisy sosona godorao napetraka amin'izay mihena ny halaviran'ny ngorodona amin'ny valin-drihana ary ahafahan'i Boy manakatra ny valin-drihana sy ireo varavaran-kely sasany… Ireo manampahaizana Anglisy sasany nanome toro hevitra amin'ny fampiasana … “electroguard”… tsy afaka manainga ny orony intsony i Boy – tonga izy dia tratran'ny herinaratra. Tsy nisy olona niahy fa mila manainga ny orony ny elefanta – io no fomba hampisehoan'izy ireo ny fihetseham-pony. Tahaka ny fanomezana herinaratra ny alika isaky ny manakipaka ny rambony izany. Niharan'ny tsindrin'ny rarintsaina izy nandritra izay fotoana rehetra izay…
Ity eritreritra mikasika ny fahafatesan'ireo biby tao amin'ny Zoo Kiev ity noho ny tsy fahaizan'ny mpitantana dia tohanan'ireo mpiasa roa fahiny tao amin'ilay Zoo ihany koa, Kirill Trantin sy Sergey Grigoryev. Nanangana ny vondrona mpamonjy ny Zoo ao Kiev izy ireo ary niezaka ny hisintona ny sain'ny olona amin'ny zava-mitranga any. Misy vondrona vitsivitsy ihany koa nitsangana tahaka izany.
Ny tantaran'ny Zoo ao Kiev dia mbola feno zava-miafina ary sarotra ny maminavina raha hahafantatra ny tena zava-marina mikasika ny fahafatesan'ireo biby ireo ny mponina indray andro any. Ny fihetseham-pon'ireo mpitoraka blaogy Okraniana dia afaka haseho tsara amin'ity lahatsoratr'i K011fetka ity, izay nanoratra:
Ny famonoana biby dia faharatsiam-panahy, fanimbazimbana ary mahatsiravina. Tsy nanao zavatra ratsy izy ireny. Ary tena mahatoky ny olona.